SERASERA, TENY MALAGASY: NISONGADINA (02/06/11) - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY: NISONGADINA (02/06/11)
2 Juin 2011, 12:39pm
Tsara ny mampahatsiahy fa ny tale jeneraly vonjimaika ao amin’ny ACM amin’izao fotoana izao dia ilay nanao sonia ny NOTAM tsy mamela ny Filoha RAVALOMANANA Marc hiverina an-tanindrazana ary diso fantatra loatra ny fianakaviany satria Willy Mamonjisoa Ratsirahonana no anarany.
06 sy 07 Jiona : mitodika any Gaborone izao tontolo izao (+vidéo)
Voarain’ny Ankolafy Politika sy vondrona politika Malagasy ny fanasana avy amin’ny SADC hanatrika ny dinika any Botswana. Ny 05 Jiona no tokony hanainga ny ireo delegasiona hihazo an’I Gaborone ary ny 06 sy ny 07 Jiona no tetiandro voafaritra fa hanatanterahana ny dinika any amin’ny renivohitr’I Botswana. Raha ny fantatra dia dimy isaky ny ankolafy na vondrona politika no voafaritra ao anatin’ny fanasana avy amin’ny SADC.
Ankoatry ny Anklafy telo dia misy vondrona politika valo no nahazo fanasana ka ny fito amin’ireo dia manohana ny FATE avokoa. Hafana arak’izany ny adihevitra satria ny manana ny fahamarinana dia vitsy an’isa raha mihoatra amin’ny mpanaraka ny mpanongam-panjakana. Raha ny fijerena ny lisitra dia ny fito tamin’ireo vondrona politika nanao sonia ilay soidalan’I Simao teny Ivato no nasain’ny SADC fa ny fahavalo kosa, dia ny elatra Yves Aimé, no tsy nahazo izany fanasana izany.
« Tsy vonona hamaha olana i Rajoelina » hoy Fetison Rakoto Andrianirina (+vidéo)
Na dia efa heritaona aza izao no nanakatonan’ny FATE ny Radio Fahazavana dia miezaka hatrany mampita ny vaovao marina hoan’ny vahoaka ny mpiara-miasa ao anatiny. Isan’ny fandaharana be mpanaraka tamin’ity onjampeo ity ny “Apenjiky” andraisana vahiny iray mitondra fanehoan-kevitra momba ny fiainam-pirenena. Vahinin’I Lolot Ratsimba omaly 31 May 2011 I Fetison Rakoto Andrianirina niresaka indrindra mahakasika ny fihaonana any Gaborone Botswana ato ho ato.
Amin’ity mpitarika ao amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA ity dia tsy manana fahavononana hamaha ny olana eto Madagasikara velively I TGV. Manaporofo izany ny angoatenda etsy sy eroa mikasika io fihaonana an-tampony io. Toa izy mpanongam-panjakana indray no mametraka fepetra amin’izao tontolo izao momba ny zavatra hatao any Botswana. Miseho entitra mihitsy aza izy niteny fa “rehefa tsy sonia no hatao any dia mody isika” nefa vao andro vitsy monja no nilazany fa tsy hanatrika izany fihaonana izany ny tenany satria “tsy isan’ireo nanao rangom-pohy teny Ivato”. Izany no fihetsiky ny olona mieritreritra hametraka fepetra hanerena izao tontolo izao hanao izay tiany. Ny fomba firesaky ny mpitarika ny fanonganam-panjakana dia efa milaza mazava fa haneho ny toetra maha –jiolahy azy indray izy amin’izay fihaonana manaraka eo ary izy rahateo efa nanantitra fa tsy maintsy hiroso amin’ny fifidianana na inona na inona vokatr’io fihaonana hatao any Gaborone io.
VIDEO: Suivre les liens